World Book Day Celebration at British Council Library on 30 April 2014 - Myanmar Network
World Book Day Celebration at British Council Library on 30 April 2014
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on April 9, 2014 at 17:16 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
"ကမ္ဘာ့စာအုပ်များနေ့" အထိမ်းအမှတ် အစီအစဉ်များ ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင် ကျင်းပမည်
"ကမ္ဘာ့စာအုပ်များနေ့" အထိမ်းအမှတ် အစီအစဉ်များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင် ဧပြီလ (၃၀) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များတွင် ကလေးများအတွက် ဆေးရောင်ခြယ်ပြိုင်ပွဲ၊ ပုံပြင်ပြောပြခြင်း နှင့် စာပေဟောပြောပွဲ တို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး စာပေကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူများအားလုံး အတူတကွ ပါဝင်ဆင်နွဲရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆေးရောင်ခြယ်ပြိုင်ပွဲကို ဧပြီလ (၃၀) ရက် နံနက် (၁၀) နာရီမှ စတင်ကာ အသက် (၅) နှစ်မှ (၁၁) နှစ်အထိ ကလေးငယ်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ ရောင်စုံခဲတံနှင့် ဆေးရောင်ခြယ်ရန် ပုံများကို စာကြည့်တိုက်မှ ပြင်ဆင်ထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးများ အနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ရောင်စုံခဲတံများလည်း ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးများကို အသက်အလိုက် အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲ၍ ယှဉ်ပြိုင်စေမည်ဖြစ်၍ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှ အကောင်းဆုံး ဆေးခြယ်နိုင်သူ (၅) ဦးကို ရွေးချယ်၍ ဆုများချီးမြှင့်သွားပါမည်။ အကောင်းဆုံးလက်ရာများကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ကလေးစာကြည့်တိုက်တွင် ပြသထားပါမည်။
နေ့လည် (၁:၃၀) နာရီ တွင် အသက် (၅) နှစ်မှ (၁၂) နှစ်အရွယ် ကလေးများအတွက် ပုံပြင်ဖတ်ပြမည့် အစီအစဉ်တွင် ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ပုံပြောကောင်းတဲ့ ဆရာမ Rachael မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပုံပြင်များကို ဖတ်ပြသွားပါမည်။ ထို့နောက် ကလေးများကို လက်ဆောင်များ ပေးပါမည်။
ညနေ (၅) နာရီတွင် အသင်းဝင်များနှင့် စာပေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ အားလုံးအတွက် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပပါမည်။ ဆရာအောင်သိန်းကျော် (အေတီကေ (ခ) ဆူဒိုနင် (ခ) အတ္တကျော်) တို့မှ “သတင်းကို ချင့်ချိန်ပိုင်းခြား လက်ခံနိုင်စွမ်း (Media Literacy and News Literacy)” ဆိုသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ဟောပြောပွဲအပြီးတွင် ဆရာနှင့် သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့၌ ကမ္ဘာ့စာအုပ်များနေ့ကိုဆင်နွဲရင်း အသင်းဝင်သူများအား ဗြိတိသျှကောင်စီ အမှတ်တံဆိပ်ပါခဲတံအိပ်လေးများ လက်ဆောင်ပေးအပ်သွားပါမည်။
အထက်ပါအစီအစဉ်များကို တက်ရောက်လိုသူများ အနေဖြင့် ဧပြီလ (၂၈) ရက် တနင်္လာနေ့နောက်ဆုံးထား၍ ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Register online -> http://tinyurl.com/bclib2014
တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်တို့ ဖြင့်လည်း စာရင်းပေးနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၂၅၄၆၅၈ / ၂၅၆၂၉၀ လိုင်းခွဲအမှတ် ၃၃၁၆ နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ library.enquiries@mm.britishcouncil.org ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းဝင်မဟုတ်သူများလည်း ပါဝင်နိုင်ပြီး စာကြည့်တိုက်သို့ လာရောက်သောအခါ မှတ်ပုံတင် (သို့) ကျောင်းသားကဒ် တစ်ခုယူဆောင်လာရန်လိုပါသည်။
စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မူများအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဗြိတိသျှကောင်စီ ဝက်ဗ်ဆိုက် www.britishcouncil.org.mm သို့မဟုတ်www.myanmar-network.net သို့မဟုတ် https://www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Nandar Htway on April 25, 2014 at 15:05
Library member or Myanmar network member?
Permalink Reply by British Council Customer Service on April 26, 2014 at 10:26
Dear Nandar Htway,
Kindly inform you that this event is for both library member and non- member. You can register online or at the library desk by Monday 28 April for the activities. Please note that the places are limited and the registration will be based on first come first served.
Aye Kyi Khaing